Mose, Nsɛm Du no, ne Nantwi Ba Honi | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Wɔanni Wɔn Bɔhyɛ So
Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: ‘Bra me nkyɛn wɔ bepɔw no so. Mɛkyerɛw me mmara agu abopon anaa abo so ama wo.’ Enti Mose foro kɔɔ bepɔw no so, na ɔtenaa hɔ nna mmaako mmaako 40, awia ne anadwo. Mose wɔ hɔ no, Yehowa kyerɛw Nsɛm Du guu abopon mmienu so maa no.
Ɛkyɛe kakra no, ɛyɛɛ Israelfo no sɛ Mose agyaw wɔn hɔ. Enti wɔka kyerɛɛ Aaron sɛ: ‘Yɛpɛ sɛ obi di yɛn anim. Yɛ nyame ma yɛn!’ Aaron nso kaa sɛ: ‘Momfa sika kɔkɔɔ a ɛhyehyɛ mo no mma me.’ Afei ɔnanee sika kɔkɔɔ no, na ɔde yɛɛ nantwi ba honi. Ɛnna nkurɔfo no kaa sɛ: ‘Nantwi ba yi ne yɛn Nyankopɔn, ɔno na oyii yɛn fii Egypt!’ Wofii ase som sika nantwi ba honi no, na wodii afahyɛ nso. Wohwɛ a, na ɛyɛ bɔne? Aane, efisɛ na Israelfo no ahyɛ bɔ sɛ Yehowa nko ara na wɔbɛsom no. Nanso afei deɛ, na wɔrebu ɛbɔ a wɔahyɛ no so.
Yehowa huu nea na ɛrekɔ so no nyinaa. Enti ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: ‘Si kɔ nkurɔfo no nkyɛn. Wɔrebu me mmara so, na wɔresom atoro nyame bi.’ Enti Mose sian fii bepɔw no so. Ná okura abopon mmienu no.
Bere a Mose rebɛn baabi a Israelfo no wɔ no, ɔtee sɛ wɔreto dwom. Afei ohuu sɛ wɔresaw, na wɔrekotow nantwi ba no. Enti Mose bo fuwii paa. Ɔtoo abopon mmienu no bɔɔ fam, na ebubuu nketenkete. Ntɛm ara na ɔsɛee ohoni no. Afei obisaa Aaron sɛ: ‘Ɛyɛɛ dɛn na nkurɔfo no ma woyɛɛ adebɔne a ɛte saa?’ Aaron nso kaa sɛ: ‘Mma wo bo mfuw. Wunim sɛnea nkurɔfo yi te. Ná wɔreka sɛ wɔpɛ nyame, enti mede wɔn sika kɔkɔɔ no guu ogya mu. Ɛnna nantwi ba yi fii mu bae!’ Ná anka ɛnsɛ sɛ Aaron yɛ saa. Enti Mose san foro kɔɔ bepɔw no so. Ɔkɔpaa Yehowa kyɛw sɛ ɔmfa nkurɔfo no bɔne nkyɛ wɔn.
Wɔn a na wɔpɛ sɛ wɔsom Yehowa no, ɔde wɔn bɔne kyɛɛ wɔn. Mose na na odi Israelfo no anim. Enti afei, woahu nea enti a na ɛsɛ sɛ Israelfo no tie no no?
“Sɛ wohyɛ Onyankopɔn bɔ a, ntwentwɛn wo nan ase sɛ wubetua, efisɛ n’ani nnye nkwasea ho. Nea woahyɛ ho bɔ no, tua.”—Ɔsɛnkafo 5:4
Nsɛmmisa: Bere a Mose nni hɔ no, dɛn na Israelfo no yɛe? Mose bae no, dɛn na ɔyɛe?
Israelfo no Anni Wɔn Bɔhyɛ So